Elefanta - Tandindona sy dikany amin'ny nofy | Diksionera nofy - Rakibolana Nofinofy
Ny Dikan'ny Karatra Tarot
Drafitra DIEMARY Elefanta - Simbolo sy hevitry ny nofy amin'ny maso
Elefanta - Simbolo sy dikany amin'ny nofy
Nofinofy: ny amin ' C D MAHAVONONA F h H aho J ny L M N NA t F R S T U V IN X Y amin'ny
E - Herinaratra
Elefanta - Maso
( jereo Biby )
Ianaro daholo Biby Fanahy, Totem & Hery !
Ny elefanta dia maneho toetra tsara maro, anisan'izany ny fitiavana sy ny tsy fivadihana. Diniho hoe ohatrinona amin'ny roa no nomenao ny tenanao, na ny manodidina anao, ary ny mifamadika amin'izany.
Ireo zavaboary ireo koa dia manana fofona mahery izay manome fahaiza-manavaka. Ahoana ny fofon'ny toe-javatra misy anao ankehitriny? Misy tsy mety ve?
Fifandraisana amin'ny fiankohofana natiora. Raha ny filazan'i Pliny dia mivavaka amin'ny masoandro sy ny kintana ity zavaboary ity ary miantso ny lanitra.
Tamin'ny andro taloha Roma , ity sary ity dia niseho tamin'ny vola madinika maneho ny herin'ny fiantrana. Misy olona manodidina anao ve mila zavatra tsy nojerenao?
Anisan'ireo Hindoa , ny elefanta dia tandindon'ny fahendrena. Ganesha, andriamanitry ny hakamoana, dia elefanta, dihy aseho matetika.
Bodista mihevitra ny fotsy elefanta ho tandindon'ny fangorahana, fitiavana, hatsaram-panahy, fifehezan-tena ary fiaretana, izay manambara ny fisehoan'ny toetra tsara toy izany ao aminao. Na izany aza, mariho, ny fiarahamonina tandrefana dia manova ny hevitr'ity sary ity amin'ny haingon-trano tsy misy ilana azy (oh: «fivarotana elefanta fotsy»), izay mety hanehoana ny tsy fisian'ny fahamendrehana na fahatsapana tsy mahomby amin'ny toe-javatra manokana.
Sinoa: Hendry sy fahefana mahaleo tena amin'ny tena, amin'ny hafa na amin'ny toe-javatra iray. Aza matahotra handray andraikitra!
Amin'ny aphorism maoderina, a mavokely elefanta dia maneho ny famitahana ataon'ny fahatsapanao samirery. Matetika ny delestazy dia avy amin'ny tananao (toy ny mitranga rehefa misotro toaka be loatra).
( jereo fiakarana, tohatra, tohatra )
( jereo Fairy )
( jereo lamba, fanjaitra )
( jereo Zaza, Fahaterahana, fanalan-jaza, fitondrana vohoka )
Ho an'ny vehivavy bevohoka, na ny sakaizany, nofinofy iray izay tsy mila fandikana bebe kokoa.
Fotoana fiasana sy fiandrasana izay mety maharitra 40 herinandro. Tsy toe-javatra mety hirotorotoana na teritery io.
Fiandohana na fotoana vaovao vao nekena, na vao manomboka mivoatra.
( jereo Ampakarina, mpampakatra, fifandraisana, fampakaram-bady )
Fanoloran-tena voajanahary sasany, saingy mbola tsy maharitra. Fotoana mety izao hijerena indray ny eritreritrao ary alao antoka fa fanapahan-kevitra tsara tokony hatokisanao izany.
Amin'ny maha-filalaovana teny anao, ny fanoloran-tena ara-tsosialy mety anananao, na mety tsy hanana fotoana tianao (ohatra: 'fifampiraharahana manery').
pisces lehilahy sy sagittarius vehivavy manao firaisana
Inona ny fahatsapanao amin'ity nofy ity? Faly sy afa-po ve ianao amin'ny fianianana natao? Raha tsy izany dia mety taratry ny tebiteby na fahatezerana noho ny fanambadian'ny olon-kafa atsy ho atsy, na eritreritra faharoa momba ny andraikitra noraisinao tato ho ato.
( jereo Manoratra )
Maniry ny hanafoana zavatra toa tsy nisy akory, na hanitsy lesoka tanteraka.
Ny fahaizanao manitsy ny toe-javatra iray izay manelingelina anao. Jereo mba hahitana hoe inona ny teny na piktografitra voafafa hahazoana sanda fandikana bebe kokoa.
( jereo Cage, Fisarahana )
Fambara iray tena manamarika manamarika ny fiandohan'ny fotoana tsara kokoa.
Mahatsiaro ho voafandrika, saingy tsy misy hetsika tsy maintsy atao izay mitondra amin'ny fanafahana. Diniho tsara ny antsipirian'ny nofy ity raha toa ka manolotra ny vahaolana tadiavinao izy.
Fanelingelenana mamela ny fandosirana vetivety amin'izay rehetra ao an-tsainao.
Mampisaraka ny zava-kendrenao amin'ny toe-javatra hitanao fa tsy salama na tsy faly.
( jereo Mainty, Maizina, Bibidia )
Ho an'ireo mandeha amin'ny mazava, ny nofy momba ny ratsy dia tsy mahafinaritra ary azo antsoina hoe 'nofy ratsy' na 'fampihorohoroana amin'ny alina'. Na ireo izay manana lalan'ny karma na manana fifanarahana masina mandeha amin'ny maizina aza dia mety hahatsapa fa ny dikany ara-panoharana ny nofy momba ny ratsy dia mety hahatonga azy ireo hohozongozonina sy hikorontana mandritra ny andro maro.
Alokao manokana; lafy ratsy handresena ao anaty.
Metaphysically, ny hery maizina misy amin'ny zava-drehetra, mitazona ny fifandanjana ( jereo ny helo ).
Ny demonia sy ny zavaboary mahery setra hafa dia maneho tahotra sy fanahiana miseho amin'ireny sary ireny Raha tena mandrahona ilay manonofy dia mety haneho fankahalana tena na fahatsapana ho meloka izany. Raha tsy izany, io dia mety hanondro ireo namana mampidi-doza izay maloto fitondran-tena maloto amin'ny endrik'olona fandokafana.
Mihaza zavatra toa tsy azo tohaina na takona amin'ny fomba fijery mivantana. Noho ny tany tafiditra dia mety misy ifandraisany amin'ny fototra iorenany izany.
Metaphorically, mandavaka ny loto amin'ny olona na toe-javatra iray.
Manala sarona izay miandry fotsiny ny ezaka ataonao hahitana azy ireo.
Mikaroka ny lasa taloha mba hahitana ny hasarobidin'ny traikefa, ary ny fomba nanatanterahan'izy ireo anao ary iza ianao ankehitriny.
( jereo Loza, Dinamita )
Tsy fankasitrahana na tsy fahafaham-po amin'ny hevitra manokana, olona, ​​na toe-javatra izay tonga amin'ny teboka mitsikera.
Fihetsiketsehana tsy mitandrina na tsiambaratelo nanararaotra fihetseham-po nipoaka.
Marika iray hafa ho an'ny firaisana ara-nofo fatratra.
Manimba ny vato misakana izay manambana hanakana ny lalanao na ny tanjonao.
( jereo Vatana, tarehy )
Amin'ny maha varavarankely ny fanahy azy ireo dia manambara amintsika ny marina. Ka ahoana ny fisehon'ny maso? Misokatra tanteraka ve izy ireo hahita ny zava-misy marina?
Fitsarana avy amin'ny hafa, na tsarao ny tenanao noho ny fihetsika na teny manokana. Amin'ny fomban-drazana hindoa, ny andriamanibavy dia afaka mamorona na manimba an'izao rehetra izao amin'ny indray mipy maso fotsiny. Toy izany koa, any amin'ny faritra Syria sy Mediteraneana, ny mason'ilay andriamanibavy hita maso dia naneho ny fahamarinana sy ireo lalàna manerantany izay tsy azon'ny olona afenina.
Ny endrika sy ny haben'ny maso dia mety hihazona hafarana. Ohatra, ny maso kely dia kely miseho mikatona ao anaty nofy dia manondro olona kely saina ary tsy te hijery fomba fijery hafa.
Ny fepetra isan-karazany amin'ny fahitana dia manana dikany manokana ihany koa. Ny fahitana lavitra dia manondro ny filàna fanitarana ny fomba fijerinao, fa ny fahitana lavitra kosa dia milaza fa tokony hijerena akaiky ireo zavatra ianao. Ny fahitana ny tionelina dia mitovy amin'ny fifantohana amin'ny tanjona iray ka tsy raharahianao ny mahita ireo mety ho vintana sy zoro mety hahombiazanao. Ary farany, ny fananana katarakta dia karazana nofinofin'ny fahajambana, izay misy fihenan'ny ampahany na tanteraka tanteraka.
Eye of Horus: Fahendrena ao anaty ny saina ary ny herin'ny fahalalana manampy antsika hahita sy hahatakatra mazava kokoa ny zavatra.
leo vehivavy pisces lehilahy eo am-pandriana
Maso fahatelo (afovoan'ny handrina): Ny toetoetra ara-tsaina sy ny fahatsiarovan-tena manerantany (izany hoe ny fahaizan'ny psychic na clairvoyant)
Raha ny maso ankavanana no tsy hitanao amin'ny nofinao, dia maneho ny masoandro izany, fa ny mahita ny ankavia kosa dia maneho ny volana (araka ny fahitana an'i Mithras).
Maso misolelaka: Ny misolo tena ny masoandro-ny lozika, ny saina, ny saina ary ny fisainana. Raha tsy izany, io dia afaka maneho ny fijerena zavatra akaiky tokoa.
Sarin'ny mason'ny pop: Fahagaga, fientanam-po na tahotra be dia be.
Maso roa samy hafa loko: Ity tandindona ity dia mihaino ny vanim-potoana taloha teo amin'ny tantara rehefa nisy olona nanana mpianatra roa samy hafa loko noheverina ho afaka hitantana ilay maso ratsy. Misy olona mijery anao amin'ny fikasan-dratsy ve, na fanentanana feno fitiavan-tena?
Ny fanaovana solomaso ao amin'ny nofinao dia manondro fahitana simba izay namboarina. Na izany aza, raha misy solomaso ny solomaso, zahao raha tsy mijery toe-javatra iray na olona iray ianao amin'ny alàlan'ny 'solomaso miloko mena.'
Sagittarius sy Taurus mifanentana: fisakaizana, fitiavana ary firaisana
Ny dikan'ny karatra Tarot enina amin'ny sabatra
Inona no dikan'ny Jolay? Vato nahaterahana jolay, famantarana zodiaka, voninkazo, isa ary maro hafa!
Karazana nofy 30 sy ny dikan'izany
Nomery anjely: Ny torolàlana feno amin'ny dikany sy ny hafatr'izy ireo
leo vehivavy sy capricorn lehilahy eo am-pandriana
inona avy ireo planeta amin'ny rafi-masoandro
taona sinoa ny dikan'ny gidro
taurus vehivavy sy pisces lehilahy eo am-pandriana
vehivavy libra sy pisces lahy manao firaisana